Usewuvulile umnyango ngokubuyela kwabalandeli ezinkundleni uhulumeni - Impempe
Usewuvulile umnyango ngokubuyela kwabalandeli ezinkundleni uhulumeni
April 16, 2021 April 16, 2021 Impempe.com
Sekungenzeka bagcine bevunyelwe ukubuyela ezinkundleni abalandeli njengoba uNgqongqoshe wezeMidlalo nokuNgcebeleka kuleli, uNathi Mthethwa ethi bayazicubungula izicelo ezifikayo zivela ezinhlanganweni ezengamele imidlalo ehlukene ezicela ukungenisa abalandeli.
Uthe bebengakazitholi izicelo eziningi kwazise kusenovadlwana ngokuthi kungase kubuye elinye iqubula leCovid-19.
Abalandeli abazange bevunyelwe ukubuyela ezinkundleni yize imidlalo ehlukene seyidedelwe ukuba ukubeke kulandela ukumiswa nyakenye ngenxa yokubheduka kweCorona Virus.
“Ngiyazi abamasonto nezinye izindawo sebevulile kodwa besingeke sikwazi ukuba nesimo la kuzohlangana khona izinkulungwane zabantu ndawonye.
“Kusavunyelwa isibalo esithile kuphela. Indaba yezonkundla zemidlalo nemicimbi emikhulu lubucayi, futhi kumele siluphathe ngesinono,” kusho uMthethwa kwoSAfm ngoLwesine.
Uthe izinhlangano zezemidlalo zivumelekile nokho ukufaka izicelo zokubuyisa abalandeli kanti bazocubungula isicelo ngasinye.
“I-PSL (Premier Soccer League) yamukelekile ukwenza izethulo zayo ngokuthumela iSafa. Kodwa bekungaba ngcono uma bekuzofakwa isicelo esisodwa yiSascoc (South African Sports Confederations and Olympics Committee).
“Abebhola lombhoxo sebesifakile isicelo futhi banezinhlelo eziphusile zohambo lweLions. Kodwa kumele sikubeke phambili ukuhlengwa kwezimpilo zabantu.
“Uma kuza kwezemidlalo kumele ubheke ukuthi kwenziwa njani ngenkundla emumatha abantu abangu-60 000. Kunzinyana. Kuzodingeka kucutshungulwe kahle ngokwehlukana kwezinhlaka.
“Akusona isimo esilula njengoba kucatshangwa. Bekulele kuzo izinhlangano zezemidlalo ukuthi size kithi zizofaka izicelo ngokubuyela kwabalandeli ezinkundleni.
“Sisanda kuqala nje ukuthola isicelo. Ngicabanga ukuthi abezemidlalo nabo bebeqikelela kwazise kusasosakala ukuthi kuza iqubula lesithathu,” kusho uMthethwa.
Previous Previous post: Sekuyezwela kuHunt ngokuncishwa kweChiefs amaphenathi
Next Next post: ‘Yimina engafaka uBenni Osuthwini,’ kusho uMngqithi